Accueil > Gazetin'ny nosy > Rolly Mercia: Resy tany Mahajanga
Rolly Mercia: Resy tany Mahajanga
“Niatrika fitsarana”! Izany no endrika ny fifanatrehan’ireo mpanolotsainan’ny tanàna ao andrenivohitr’i Mahajanga tamin’ny Ben’ny tanàna ao an-toerana, Andriatomanga Moktar omaly tao amin’ny lapan’ny tanàna tao andrenivohitr’i Boeny. Ny antony dia nisy fangataham-panazavana (démande d’explication) izay nahitana fanontaniana maromaro avy amin’ny Filankevitry ny tanàna ao Mahajanga, nasaina novalian’ny ben’ny tanàna, ka omaly no tokony namaliany azy ireo an-tsoratra, miaraka amin’ny famaliana sy fanomezana fanazavana am-bava koa.
Ny tanjon’ireo mpanolotsainan’ny tanàna tamin’izany dia ny hamatorana andraikitra ity ben’ny tanàna ka hirosoan’ireo mpanolotsainan’ny tanàna tamin’ny tsangan-tanana ho fampiatoana amin’ny asany amin’ny maha-ben’ny tanàna an’Andriatomanga Moktar.
Tetika maloto nokotrehin’ny fitondrana foibe io satria tsy zakan’ny vavonin’ny Hvm mihitsy ny mieritreritra ny hoe “olona tsy avy amin’ny Hvm no mitantana ny renivohi-paritany isan-tokony eto Madagasikara”.
Ny tany Fianarantsoa moa dia tamin’ny alalan’ny paika maloto no nampandresena ny kandidan’ny Hvm ho ben’ny tanàna tao rehefa nisongadina ny fahazoan-dRazanamahasoa Christine ny ampaham-bato betsaka kokoa noho ny an’ny mpifaninana taminy, ary dia nivadika ny vokatra taorian’io paika maloto io ka ny kandidan’ny Hvm no lasa ben’ny tanàna. Ny teto Antanaarivo dia nibaribary ny ampaham-bato goavana nahazoan’ny mpifaninana tamin’ny kandidan’ny HVm ny fandresena. Lasan’ny kandidan’ny Mapar koa ny fitantanana ny renovohitr’i Toamasina. Toraka izany ny tany Antsiranaa, saingy amin’izao fotoana dia nataon’ny fitondrana foibe Hvm antsojay sy fandrahonana mirivorivo ny ben’ny tanàna any andreniovohitr’Antsiranana ka voatery nanatevin-daharana ny Hvm.
Fa raha hiverina any Mahajanga isika dia omaly no nisehoan’izay karazam-pitsarana ny ben’ny tanàna izay. Nanantena mafy mihitsy ny fitondrana foibe fa ny maro an’isa amin’ireo mpanolotsainan’ny tanàna ao Mahajanga dia hiroso amin’ny fampiatoana amin’ny asany ny ben’ny tanàna Andriatomanga Moktar, rehefa nitondrana “malety goavana sady mavesatra”.
Taorian’ny fanazavana nentin’ny ben’ny tanàna tamin’ireo fanontaniana napetraka ny mpanolotsaina’ny tanàna àry dia natao ny tsangan-tanana ka tsy naharesy tosika an’ireo tsy nankasitraka ny hampiatoana amin’ny asany an’i Moktar Andriatomanga ny saribakolin’ny Hvm na efa navesatra aoka izany aza ny fitonton’ilay “malety”.
Ny vokany izany dia tsy nahomby ny tetiky ny fitondrana Hvm.
Teo ankilany moa dia karazan’ny nanome hery an’ireo mpanolotsainan’ny tanàna hijoro araka ny foto-kevitra maharesy lahatra azy ny fisian’ny vahoaka marobe tonga teo anoloan’ny lapan’ny tanàna, izay naneho ny fanohanany anr’Ingahy ben’ny tanàna.
Tetsy andaniny dia karazan’ny felaka tehamaina ho an’ny Hvm izay notarihin’ny minisitra ny Fifandraiasan Harry Laurent Rahajason na i Rolly Mercia izany tranga izany satria amin’ny maha-minisitra mpiahy an’i Boeny azy dia izy no tena “tompon’ny fanalahidy” hirosoan’ny Hvm amin’ny fametrahana Delegasiona manokana hitantana ny tanànan’i Mahajanga Renivohitra. Resy izany ry Rolly Mercia omaly, ary tsy iza no nampidaraboka azy fa ilay ben’ny tanàna nofokaina ho “safiotra salamo Malagasy”, saingy notoavin’ny vahoakan’i Mahajanga satria olona nofidiany ary nahatsapan’ny mponina ao an-toerana ny fahombiazany hatreto.
Tsy voalohany nandoavan’ny mponin’i Mahajanga an-dry Rolly Mercia izao tranga omaly izao fa tamin’ny volana febroary, rehefa nizahozaho nitety faritra ny Hvm, ary tonga tany Mahajanga ny minisitra maro ao amin’ny governemanta, mba hifampirary soa tamin’ny vahoakan’i Mahajanga noho ny taona vaovao tamin’izay dia nihanjahanja tao amin’ny Kianja Mitafon’i Mahajanga ry Rolly Mercia sy ny namany satria ry zareo avy aty amin’ny foibe Hvm sy ny mpitondra fanjakana tonga tao aza no maro an’isa noho ireo vahoaka nentanina.
Raha ny lojika pôlitika dia tokony ho ampy hametrahan’i Rolly Mercia fialana amin’ny maha- ministra mpiahy an’i Boeny azy ireo tranga roa ireo, fa ambonin’izany dia henatr’olona angamba sisa no itafian’i Rolly Mercia lamba fa dia tena afa-baraka tanteraka. Tokony hanaja tena rehefa tsy mahomby dia miala e!
Anio sabotsy moa dia fantatra fa hitsidika an’i Mahajanga ny filohampirenena Rajaonarimampianina, ka hoy ny mpanara-maso hoe “tsy fain’ny tany Ambilobe tsy nahavory vahoaka ve Ingahy Filoha fa mbola handeha hijery ny fahavozana any Mahajanga ihany koa?”